Xulka K/Cagta South Africa - BBC News Somali
Xulka K/Cagta South Africa
Image caption Kooxda South Africa dalkeeda ayaa lagu qabanayaa koobka, dad badan ayaa rajo ka qabo in ay guul keenaan.
South Africa, waxaa lagu naaneysaa, "Bafaan Bafaana", Tababarehooda Juwel Santana, oo u dhashey dalka Brazil. Liiska guddiga maamula ciyaaraha adduunka ee FIFA ee sida kooxuhu u kala sareeyaan, waxaa South Africa ay kaga jirtaa kooxda 78aad. Heerkii ugu sarreeyay waxaa ay gaareen sannadkii 1996kii, markii ay liiteenna waxaa ay ahayd sannadkii 1993kii.
South Africa, waxay ka ahayd dalalkii xulalkooda lagu aasaasay Xiriirka ku cagta ee Afrika magaalada Khartoum ee dalka Sudan sanadkii 1957-dii, oo dowladaha Masar, Sudan iyo Koofur Afrika ay ku heshiiyeen in la qabto tartan ay isugu yimaaddaan xulalka qaaradda Afrika. Hase yeeshee, xiriirka FIFA ayaa Koofur Afrika kaga mamnuucey ka qeyb gelidda kkoobka k/c ee aduunka iyo koobka qaramada afrika sababo ay ugu horaysay midabtakoorka ka jiray dalkaas.
Image caption Joel Santana, Nelson Mandela iyo kooxda South Africa ee kubadda cagta.
Xulka Koonfur Africa dhowr jeer ayuu ka qaybgalay koobka kubadda cagta adduunka. Hase yeeshee, 1957kii illaa iyo 1992kii waxaa loo diidey xulka dalka koofur afrika inay ka qeyb galaan tartamada kubadda cagta ee Qaramada Qaaradda Afrika midab takoorka dalka ka jiray awgii.
1994-kii umayan soo bixin ciyaaraha kama dambeysta koobka k/cagta ee Qaaradda Afrika. 1996kii ayay qaadeen koobka kubadda cagta ee koobka Afrika, iyadoo 2-0 finalka kaga adkaatay kooxdii Tunisia matalaysay.
Ciyaartii ugu horreysay oo heer caalami ah ay ciyaarto,waxay wada ciyaareen xulka Netherlands ama Holland, waxaana 2-0 ku badiyay Koonfur Africa.